मिस लिटिल नेवा ११३९ सनिशा भन्छिन् ‘इन्टरनेट नचलाएको भए मिस नेवाबारे थाहा नै हुन्नथ्यो’ | नुवागी
नेप्लीज फेसन होमले आयोजना गरेको ‘मिस लिटिल नेवाः ११३९’ प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनालेमा आफ्नो नाम उद्घोष हुँदा सनिशा खुशीले उफ्रिइन्, आँशु झार्न सकिनन् तर भित्रभित्रै रोइन् । उनले सबैभन्दा पहिले आफ्ना आमाबुवालाई सम्झिइन् । त्यसपछि ती सबैलाई मनमनै धन्यवाद दिइन् जजसले उनलाई मिस नेवा प्रतियोगितामा पुग्न, टिक्न र जित्न सहयोग गरे । पुस २८, २०७५ का दिन राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनालेमा उनले आफू जस्तै २३ जना प्रतियोगीहरूलाई पछि पार्दै ताज पहिरेकी हुन् । उनको एउटा सपनाले साकार रुप लियो ।
‘मिस लिटिल नेवाः ११३९’ मा जान उनलाई न अभिभावकले भनेका हुन् न नै उनको विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले । उनले इन्टरनेटमार्फत त्यसको जानकारी पाएकी हुन् । उनले २ वर्षदेखि इन्स्टाग्राममा आफ्नो खाता खोलेकी छिन् । फेसबुकमा पनि छ उनको खाता । उनी टिकटक पनि चलाउँछिन् । तर उनलाई फेसबुक र टिकटकभन्दा इन्स्टाग्राम चलाउन मन पर्छ । एक दिन त्यही इन्स्टाग्राम हेर्ने क्रममा उनको आँखा मिस लिटिल नेवाको लागि आवेदन खुला गरिएको विज्ञापनमा पर्यो । उनलाई पहिलेदेखि राम्रा राम्रा लुगा लगाउन मन पथ्र्यो । कता कता मोडल हुन्छु भन्ने इच्छा भित्रभित्रै पलाइरहेको थियो । नभन्दै मिस लिटिल नेवाको त्यो विज्ञापन देख्ने वित्तिकै उनले त्यहाँ रहेको सम्पर्क नम्बर कागजमा टिपिन् । नेप्लीज फेसन होमको त्यो फोन नम्बर र कार्यक्रमबारे उनले आमा निरा र बुवा सनिशलाई बताइन् । उनीहरूको प्रारम्भिक प्रतिकृया सकारात्मक थिएन ।
‘उहाँहरूले हुँदैन, पर्दैन भन्ने वित्तिकै मैले जान्छु भनेर बल गर्न सकिनँ । मलाई जान त जान्छु भन्ने मनमा लागिरहेको थियो । तर कसरी भन्ने चाहिँ थाहा थिएन ।’ सनिशाले आफ्नो शुरुवाती अवस्था सुनाइन् । उनका अभिभावक पनि निकै अलमलमा परेको उनीहरूसँगको कुराकानीमा थाहा पाइयो । सनिशाका बुवा सनिशले भने ‘छोरीले रहर गरेको कुरामा पर्दैन भन्दा हामीहरू पनि खुशी थिएनौँ । यस्ता कार्यक्रमहरूबारे राम्रा नराम्रा अनेक कुराहरू सुनेका पनि थियौँ । फेरि छोरीलाई दुईदुई महिना डिल्लीबजार पुर्याउनु ल्याउनु हाम्रो लागि सम्भव पनि थिएन । तर केही दिनको सोचविचारपछि उनलाई पठाउने निर्णय गर्यौँ ।’
काठमाडौँको डिल्लीबजारमा २ महिना प्रशिक्षण हुने भनिएकोले निर्णय गर्न कठीन परेको भन्दै भक्तपुरमै पनि प्रशिक्षणको व्यवस्था हुने भन्ने खवर पाएपछि सनिशालाई प्रतियोगितामा सहभागी हुने ढोका खुल्यो ।
‘हरेक दिन साँझको ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रशिक्षण हुन्थ्यो । र्याम्पमा कसरी हिँड्ने, नयाँ साथीहरूसँग कसरी घुलमिल हुने, आफ्नो कुराहरू राम्रोसँग कसरी राख्ने, भन्ने कुराहरू सिकेँ । त्यो अवधिमा नेपाल भाषा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो । आफ्नै मातृभाषा भइकन पनि मलाई नेपाल भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैनथ्यो । घरमा बुवाआमाले बोल्नु भएको कति कुरा बुझ्थेँ कति बुझ्दिनथेँ । नेपाल भाषामा केही सोध्नु भयो भने पनि जवाफ नेपालीमै दिन्थेँ । तर २ महिनाको विशेष प्रशिक्षणले मलाई नेपाल भाषा बोल्ने, सिक्ने र प्रयोग गर्ने बनाइदिएको छ । मैले रञ्जना लिपी पनि सिकेँ । म आजभोलि नमस्तेको ठाउँमा ज्वज्वलपा भन्छु ।’ सनिशाले प्रशिक्षणको अनुभव सुनाइन् ।
जहाँ आफ्नो इज्जत हुन्छ, जहाँ मलाई सुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा मात्र जाने । टाढा जान परे वा राति निस्कन परे एक्लै ननिस्कने, साथमा अभिभावक लिएर जाने भन्ने कुरा प्रशिक्षणको बेलामा हामीलाई प्रशिक्षकहरूले बताउनु भएको थियो ।
पहिला कहिल्यै कतै एक्लै नहिँडेकी छोरी प्रशिक्षणको लागि आफै सार्वजनिक गाडी चढेर साँझ सात साढेसातमा पनि एक्लै घर फर्कने गरेपछि बुवा सनिशले छोरीलाई प्रशिक्षण पठाएर सही निर्णय गरेको भनी ठम्याए । उनमा बढ्दै गरेको आत्मविश्वास र अनुशासनले गर्दा घरको वातावरण समेत परिवर्तन भएकी सनिशाकी आमा निराले बताइन् । ‘पहिला त भाइसँग निकै झगडा गर्ने । मलाई पनि त्यति सहयोग नगर्ने, सरसफाइमा पनि खासै मन दिन्नथिन् । नौलो मान्छे भेटिहाले पनि बोल्न एकदमै नमान्ने खालकी थिइन् । तर अहिले लगभग सबै कुरामा परिवर्तन भइसकिन् ।’
सनिशालाई पहिलेदेखि फ्रक लाउन मन लाग्थ्यो । तर बस्दा हिँड्दा उनलाई असजिलो लाग्ने गथ्र्यो । फ्रक लगाउँदा कसरी बस्ने, मानिसहरूसामू बोल्दा कसरी बोल्नेदेखि कस्तो ठाउँमा जाने, अनि कस्तो ठाउँमा नजाने भन्ने पनि सिकेकी छन् । ‘जहाँ आफ्नो इज्जत हुन्छ, जहाँ मलाई सुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा मात्र जाने । टाढा जान परे वा राति निस्कन परे एक्लै ननिस्कने, साथमा अभिभावक लिएर जाने भन्ने कुरा प्रशिक्षणको बेलामा हामीलाई प्रशिक्षकहरूले बताउनु भएको थियो । म आफू नेवार भइकन पनि मैले लगाएका लुगा र गहनाहरूबारे थाहा थिएन । मेरो हजुर आमा र बाले मलाई घरमा ‘तिसा’ भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो । त्यस्को अर्थ गहना हो भन्ने मैले पछि थाहा पाएँ । नेवारी भोज त सधैँ खाने गरेकी छु । तर नेवारी भोजमा प्रयोग हुने तरकारीका प्रकार र त्यो कहिले कहिले राखिन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यस्तै हामी विभिन्न पूजाहरू गर्छौँ । कहिल्यै त्यस्तो कुरामा हामीले के के प्रयोग हुन्छ वा कसरी गरिन्छ भनी ध्यान दिएका थिएनौँ । त्यस्ता कुरा पनि सिक्ने अवसर मिल्यो मिस लिटिल नेवामा ।’
तपाईँले मिस लिटिल नेवाः ११३९ को ताज कसरी हात पार्नुभयो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सनिशाले भनिन् ‘अन्तिम दिनमा निर्णायकले ३ वटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो जसको राम्रो र चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको कारण मैले जित्ने मौका पाएँ । मलाई सोधिएको महत्वपूर्ण एउटा प्रश्न थियो – तिमी नभइ यो प्रतियोगितामा अरु कसैले जिते भने तिमी के गर्छौ ? ‘यदि मबाहेक अर्को कुनै साथीले यो प्रतियोगिले जिते भने म उहाँको लागि खुशी हुनेछु । किनकि जित्नु ठूलो कुरा होइन । सिक्नु ठूलो कुरा हो । र मैले यो प्रतियोगितामा आएर निकै धेरै कुराहरू सिकेकी छु । यो अवसरका लागि म मेरा प्रशिक्षकहरू, मेरा साथीहरू, मेरा अभिभावकहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ मैले यसो भनेकी थिएँ । यही जवाफले मलाई मिस लिटिल नेवाः ११३९ को ताज लगाउने भाग्य मिलेको भन्ने लाग्छ ।’
मलाई सोधिएको महत्वपूर्ण एउटा प्रश्न थियो – तिमी नभइ यो प्रतियोगितामा अरु कसलै जिते भने तिमी के गर्छाै? ‘यदि मबाहेक अर्काे कुनै साथीले यो प्रतियोगिले जिते भने म उहाँको लागि खुशी हुनेछु । किनकि जित्नु ठूलो कुरा होइन । सिक्नु ठूलो कुरा हो । र मैले यो प्रतियोगितामा आएर निकै धेरै कुराहरू सिकेकी छु । यो अवसरका लागि म मेरा प्रशिक्षकहरू, मेरा साथीहरू, मेरा अभिभावकहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ मैले यसो भनेकी थिएँ ।
सनिशा भविष्यमा वकिल बन्न चाहन्छिन् । कृषि विज्ञान पढ्ने उनको रहर उनी पूरा गर्न चाहन्छिन् । उनलाई एकल परिवार भन्दा संयुक्त परिवार मनपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘मान्छेपिच्छे घर बनाउनुभन्दा एउटै घरमा सबै मिलेर बसी बाकी जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा खेती अति आवश्यक छ ।’
केटाकेटीलाई मोबाइल वा इन्टरनेटको प्रयोगमा बन्देज गर्न नहुने उनको धारणा छ । अभिभावकले समयसीमा तोकेर आफ्ना केटाकेटीलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । केटाकेटीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तर आफै भने केटाकेटीकै सामुन्ने मोबाइल वा इन्टरनेट चलाइबस्ने गर्नाले केटाकेटीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले सुनाइन् । त्यसैले अभिभावक स्वयमले पनि अनुशासन राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । दिनमा बढीमा एक घन्टा गुगल वा त्यस्तै आफ्नो पढाइमा सहयोगी हुने किसिमका साइटहरू हेर्दा फाइदा पुग्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अल्मलिन नहुने सुझाव दिन्छिन् आफू जस्तै उमेरका साथीहरूलाई ।
भक्तपुरको जेन्युइन सेकेन्डरी स्कुलको कक्षा ७ मा पढ्ने सनिशालाई मिस नेपालहरूमध्ये निकिता चाण्डकको आत्मविश्वास, बहुप्रतिभा र प्रेरणात्मक भनाईहरू मन पर्छ । एउटाअवसरले आफूलाई पुस्तकबाहिरका अनगिन्ती विषय सिक्ने अवसर मिलेको बताउने उनी अरु साथीहरू र अभिभावकहरूलाई समेत यस्ता कार्यक्रममा जान र पठाउन सुझाव दिन्छिन् ।
चित्रकला प्रतियोगितामा बेलर र नवरत्न बिजयी